ဘတ်စ်ကား ထိုင်ခုံပေါ်မှာ သွားကြားထိုးတံတွေ ထောင်ထားခဲ့တဲ့ အသက် ၆၀ အရွယ်အမျိုးသား အဖမ်းခံရ
Pic shows: Images posted by Shervella Wong in July, showing the toothpicks. A man has appeared in court charged with ticking toothpicks into bus seats so that commuters pricked themselves when they sat down. Lim Lye Seng is said to have booby-trapped the 123M bus in this manner as it servedaroute along the Lower Delta Road in the city-state of Singapore. Using three toothpicks on each bus seat, the 60-year-old is said to have carried out the anti-social offence on four occasions in the summer of this year. The act is said to have cost the SBS Transit bus company 1,300 SGD (714 GBP) as it had to have the bus seats re-covered. It was not clear whether any passengers suffered injuries asaresult of Lim’s alleged actions. He was not represented in court by Singaporean media said he planned to plead guilty atalater hearing. He said to the court that he planned to hirealawyer to represent him at his next court appearance on 27th September. Lim faces up to two years in prison. The booby-trapped bus seats first came to light whenapassenger noticed them and postedapicture on social media captioned: "Remember to check your seat next time before sitting, guys!" (ends)
အသက် ၆၀ အရွယ် အမျိုး သားတစ်ဦးဟာ အများပြည်သူ တွေစီးနင်းတဲ့ ဘတ်စ်ကားထိုင်ခုံ တွေပေါ်မှာ သွားကြားထိုးတံတွေ ထောင်ထားခဲ့တဲ့အတွက် အဖမ်းခံရ ပြီးတရားရုံးကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
လင်းလီဆန်ဆိုတဲ့ အဲဒီအမျိုး သားဟာ စင်ကာပူနိုင်ငံ ဒဲလ်တာ အောက်လမ်းမှာ သွားနေတဲ့ဘတ် စ်ကားပေါ်မှာ အဲဒီလိုထောင်ထား ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီအမျိုးသားဟာ ထိုင်ခုံ တစ်ခုမှာသွားကြားထိုးတံ သုံး ချောင်းစီ ထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်နွေရာသီမှာ လေးကြိမ်တိတိ လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါ တယ်။
သူက အဲဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက် SBS ဘတ်စ်ကား ကုမ္ပဏီဟာ ထိုင်ခုံတွေလဲခဲ့ရတဲ့အတွက် စင် ကာပူဒေါ်လာ ၁၃၀၀ ကုန်ကျခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူ့လုပ်ရပ်ကြောင့် ခရီးသည် တွေ ထိခိုက်နာကျင်ခဲ့ရခြင်း ရှိမရှိ ကတော့ ကွဲကွဲပြားပြား မသိရပါ တယ်။
တရားရုံးမှာ သူ့အတွက်ရှေ့ နေငှားထားခြင်း မရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ သူဟာ လာမယ့် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရုံးချိန်းမှာအပြစ် ရှိကြောင်း ဝန်ခံသွားဖို့စီစဉ်ထားသ လို ရှေ့နေလည်းငှားဖို့ စီစဉ်ထား ကြောင်း တရားရုံးကိုထွက်ဆိုခဲ့ တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူဟာထောင် ဒဏ် နှစ်နှစ် ကျခံရဖွယ်ရှိနေပါ တယ်။
ဘတ်စ်ကား စီးသူတစ် ယောက်က ထိုင်ခုံမှာသွားကြား ထိုးတံတွေ ထောင်ထားတာကို တွေ့ရှိပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ကာ ‘ထိုင် မယ်ဆိုရင် ကြည့်ထိုင်ကြပါ’ လို့ ရေးပြီး လူမှုကွန်ရက်ပေါ် တင်ခဲ့ရာ ကအများရဲ့ အာရုံစိုက်ခြင်းခံခဲ့ရ တာဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်ဆောင်းပါး၁၈လ သမီးကလေးကို ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့တဲ့ လူသတ်သမား